प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईं आफ्नो आमासँग, आमाले यसरी बताईन छोराका बारेमा ! (भिडियो)
काठमाडौं – शारिरिक अवस्थामा आँखा देख्दैनन रमेश प्रसाईं र पनि यति मिहिनेती छन उनी । उनको जन्म ताप्लेजुङको फागुम्बा गाबिस वाड न. ३ मा उनको जन्म भयको हो । उनको जन्मदेखी नै आँखा थियन । उनी जन्मदा बाच्ने आशा निकै कम राखेका थिय आमा बुवाले । उनको आमा बुवा पनि स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो । सबैले रमेश प्रसाइलाइ मारिदिय पनि हुन्छ भन्थे त्यतिबेला । यस्तो बच्चालाइ कसरी पाल्छ्स भनेर भन्ने गर्दथे ।
अहिले उनी सबैको अगाडि निकै राम्रो व्याक्तिको रुपमा चिनिन्छन । यश अघि उनि पब्लिक स्पिकर बाट बिजेता भयका थिय ।करिब लामो संघर्ष पछिको यो सफलतामा निकै खुशी छ भने अझै राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छन प्रसाइले । उनी नदेख्ने भयता पनि घरमा अलि अलि काम गरिनै रहन्थे । अनेकौ किसिमका शब्दहरु को दरिलो झटारो प्रहार गर्ने गर्दछन ।
उनी सानो छदा पढन जा निकै जिद्दी गर्दथे । पछि उनी झापा दुर्गा ग्रामीण मा पढ्न थाले । त्यतिबेला उनी अङ्ग्रेजी मा निकै कमजोर थिय भने सोही स्कुलमा ३ बर्ष पछि कक्षा कै पहिलो भय अङ्ग्रेजी मा । यति मिहिनेती मान्छे को आज केही न केही सअफलता भयको छ । अझ अगाडि बड्ने प्रेरणा मिलोस । टाईम्स अफ नेपाली !